Laga bilabo 18ka Meey waxa loo bixi kara sabab la'aan iyo xad la'aan gudaha gobolka aad dagantahay, Laakiin dowlada weey xakameyn kartaa isku socodka meelaha qaar si ee u yareeyso inuu fido COVID-19.
Isku socodka gobol iyo gobol weli waa xanibanyahay, sababaha kaliya ee loogu safri karana waa in aad shaqo u socota cadeena wadataa, in aad xaalad deg deg ah u socotaa, in aad sabab caafimaad u socotaa ama in aad u socoto gurigada oo ku yaal goobta aa u safreyso. Sharcigaan wuxuu soconayaa ilaa 2da Bisha Juun ee soo socoto.
Llagabilaabo 3da Juun si guud waa loo socon doona wana la furi dona in la iskugu gudbo gobolada si xuduud la'aan, Lakiin dowlada wey xakameen kartaa diidina kartaa in la tago Gobolada qaar si loo yareeyo fidida COVID-19.
Waxaa weli mamnuuc ah in eey dad badan meel furan ama xiranba iskugu imaadaan. Wax walba inta aadan sameena hadi aad awoodo booqo webka eey internetka ku leyihiin gobolka aad joogto iyo kaad u socoto si aad u ogaato xaalada dhabta ee markaas taagan.